« Tanimboalobok’Andriamanitra isika… » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady 4 oktobra 2020
Alahady Tsotra Faha 27A
Iz. 5, 1-7; Fil. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43
Zava-dehibe eo amin’ny Soratra Masina sy amin’ny fampianaran’i Jesoa ny sarin’ny tanimboaloboka. Telo herinandro izao no nihainoana ny evanjely miresaka fanoharana momba ny tanimboaloboka hatrany. Teo ireo tsy an’asa nirahina ho any amin’ny tanimboaloboka tamin’ny ora tsy mitovy nefa samy nahazo karama mitovy; teo koa ireo zanaka roalahy samy nirahina ho any an-tanimboaloboka kanefa samy nanahirana an-drainy; ary izao farany izao dia ireo mpiasa ratsy fanahy nandringana izay rehetra nalefa mba hizaha ny vokatra any an-tanimboaloboka.
Mbola ao anatin’ny adihevitra nifanatrehany tamin’ny lohandohan’ny mpisorona sy ny loholona tao Jerosalema no nanaovan’i Jesoa ity fanoharana ity. Mbola tsy resy lahatra ireto manam-pahefana ara-pivavahana Jody ireto fa izy ireo no ilay zanaka nanome toky fa handeha ho any an-tanimboaloboka nefa tsy nandeha akory. Mbola asain’i Jesoa mieritreritra àry izy ireo ka nanaovany fanoharana hafa momba ny tanimboaloboka indray. Tantarain’i Jesoa aloha ny fomba fikarakaran’ilay tompony ny tanimboalobony: namefy ny manodidina, nandavaka ny toerana hamihazana voaloboka, nanao tilikambo fiambenana, nampanofa ny tanimboaloboka tamin’ny mpiasa. Nanantena vokatra izy amin’izany fikarakarana rehetra izany.
Tahaka ny fanoharana rehetra dia misy ny hafatra tiana ampitaina amin’izany. « Ny taranak’Israely, no tanimboaloboky ny Tompon’ny tafika, ary ny olona any Jodà no voly nolalainy… », hoy Izaia mpaminany (vakiteny voalohany). Ampahatsiahivin’i Jesoa amin’ireo mihaino azy izany. Izy ireo no mpiasa nampanofain’ny Tompo ny tanimboaloboka. Tsy tompony izy ireo fa mpanofa. Ireo « ankizilahy » nirahina hizaha ny vokatra dia ireo mpaminany maro nifandimby teo amin’ny vahoaka Israely kanefa nolavin’izy ireo sy nenjehiny ary novonoiny aza. Ilay « zanaka lahy nirahina » dia i Jesoa Kristy, zanaka lahitokan’ny Ray, nirahiny ho eo anivon’i Israely saingy nolavin’izy ireo sy novonoiny any ivelan’ny tanàna… Ny hadisoan’ireto mpiasan’ny tanimboaloboka ireto dia ny fandrombahan’izy ireo amin’ny alalan’ny herisetra sy ny vonoan’olona ny fananana izay tsy azy ireo akory: « Ity ny mpandova ; andeha hovonointsika izy, dia ho lasantsika ny lovany »… Inona àry no mety hatao an’ireto mpiasa ireto, hoy i Jesoa manontany ireo mihaino azy…
Mbola miteny amin’izao androntsika izao ihany koa anefa ny fanoharana. Eny e, faritra vitsivitsy ihany no mety hahitana tanimboaloboka eto amin’ny nosintsika, kanefa tahaka ny tanimbary ihany ny tanimboaloboka. Tanimbary izay manana ny hasiny sy ny heviny eo amin’ny fiainantsika: lova napetraky ny razana, lova ifampizarana na iadiavin’ny mpiray tampo… Tany antoky ny fahavelomana sy ny fivelomana. Toy izany koa ny tanimboaloboka Tanimboa ao amin’ny Soratra Masina sy ao amin’ny fampianaranan’i Jesoa.
Tanimboaloboky ny Tompo àry isika (Iz.27, 2-6 ; Jer 12, 10). Lalainy sy tiaviny tokoa isika ka tsy mitsahatra mikarakara sy maniraka mpiasa ety amintsika Izy; dia ireo olon’ny Fiangonana sy ireo rehetra tsara sitra-po mova tsy toy ny mpiasa nanankinana ny fampamokarana ny tanimboaloboka. Mbola maniraka « ankizilahy », amin’ny fomba maro samihafa ihany koa Izy, hatramin’izao androntsika izao, mba hizaha ny vokatra. Isan’ireny iraka ireny ireo izay manaitatitra hatrany ny fomba fiaina sy fiasan’ireo izay nanankinana ny fampivelarana ny Fanjakan’ny lanitra... Ireny no mpaminany ankehitriny. Tsy mpaminany mamantatra ny hoavy fa mpaminany mijoro manambara ny tsy mety ankehitriny…
Ho sanatriavina anie ny hanaovan’ny olona ho toy ireo mpiasa ratsy fanahy ka handà sy hitsipaka ireo irak’Andriamanitra Ray. Ho sanatriavina anie ny hitsangan-ko tompon’ny Fanjakan’ny lanitra ka hankahala sy hanenjika ireo iraka natao hanambara izany. Hitalaho lalandava ny fahasoavan’ny Tompo hatrany kosa anie ireo mpanompon’Andriamanitra Ray ka handray ny fanentanan’i Md Paoly amin’ny vakiteny faharoa hoe: « ambarao amin’Andriamanitra, amin’ny fivavahana amam-pifonana ary fisaorana, izay rehetra ilainareo na amin’inona na amin’inona »
« Ry Andriamanitry ny tafika ô, miverena, mitsinjova avy any an-danitra, jereo ka diniho ity voalobokao! Arovy izay nambolen’ny tananao an-kavanana, sy ny zanaka izay nofidinao ho anao… » (Sal 80, 15-16).
Teny Mahavelona : « Tongava, ry Tompo tsara fo ! » - il y a 2 jours
Fotodrafitrasa vaovao Md Kizito : Fitokanana ny Seminera Propedetika Provinsy Ekleziastika Atsimo Atsinanana - il y a 5 jours